ဗျို့ဆရာတို့ ..... — Steemit
ဗျို့ဆရာတို့ .....
မဟော် ပြန်လာပါပြီ။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ညီအစ်ကိုတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ပြန်လာမှုနဲ့ အတူ ပြောချင်တာတွေလည်း ရင်နဲ့ အပြည့်။ မိန်းမသားဆိုရင် ရန်တွေ့ ချင်တာပေါ့။ ယောင်္ကျားသားဆိုတော့ ထေ့ချင်တာပေါဗျာ။ဒါပေမယ့် ရင့်ကျက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးက ကိုယ့်ရှေ့မှာ ကာဆီးနေတယ်။ shut up မဟော်တဲ့။
ဒါကလူ့ သဘာဝ ဒါက ဖြစ်တတ်ပါတယ် ဒီလိုပါဘဲကွာ ဆိုတာတွေဟာ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ပြီး ညီးတွားမိတဲ့အသံတွေပါ။ အော် မပြောပါနဲ့ ဆိုမှ အစဖော်ချင်သေးတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ ကို မေးခွန်းတစ်ခုလောက် မေးကြည့်ချင်တယ်။ သိတတ်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဘယ်လိုနားလည်မိသလဲ။ သိတတ်မှုရဲ့ နောက်မှာ အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးကိန်းဝပ်နေပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သိတတ်မှုကို သင်ပေးလို့ မရပါဘူး။ mind selfနဲ့ ဘဲဆိုင်တယ်။ သိတတ်မှုဟာ အကျိုးမျှော်ကိုးစိတ်မပါဘဲ လေးစားချစ်ခင်မှု တာဝန်ယူမှု အလိုက်သိမှု ကျေးဇူးသိတတ်မှု ကိုယ်ချင်းစာမှု အစရှိသဖြင့် မြောက်များစွာပါဝင်ပါတယ်။သေချာတာကတော့ တစ်ဖက်သားကို တန်ဘိုးထားလိုက်တာပါဘဲ။
မတွေ့ တာကြာတဲ့ သူကို ဒီလို postနဲ့ မနှုတ်ဆက်ချင်ပါဘူး။ အားပေးခြင်း လှုံ့ ဆော်ခြင်းတွေဘဲရေးသင့်တာပါ။ ခက်တာက စာရေးတယ်ဆိုတာ ရင်ထဲရှိတာတွေ ခေါင်းထဲအတွေးထဲပေါ်လာတာကိုချရေးမှ အသက်ဝင်တာဆိုတော့လည်း ပါးပါးတော့ ရေးလိုက်မိတယ်ဗျာ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် စိတ်ဆိုးလို့ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ အားမလို အားမရဖြစ်တာပါ။ တစ်ခွန်းတည်း မေးချင်ပါတယ် MSCဆိုတာဒီလိုမျိုးလား။
ကျွန်တော့်postကို ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီအစ်ကိုတို့ ရေ။
Wow!. ဥဥ ပြောချလိုက်တာ. ရင်ထဲကိုဒက်ခနဲ့. တန်းထိသွားတာပဲ ဟုတ်ပါ့ MSC ဆိုတာ. ဒီလိုမျိုး လား မေး ပြိုက် ဥဥ 😋😋😋😋
Shut up. မဟော်ခု မှပေါ်. ဟိဟိ😆😆
မင်္ဂလာပါ ချစ်ဆုံး။ ကျန်းမာပါစေကွယ်။
မင်္ဂလာပါအစ်ကိုမဟော်။တို့အစ်ကိုကတော့ မေးခွန်းလေးနဲ့ စတင်လာပြီနော်။
မင်္ဂလာပါ ကိုသန့် ။ တွေ့ ချင်မှုပေါင်း များစွာဖြင့်
billionairehein (63) ·4months ago (edited)
Where is MSC?
Welcome back @mahaw
ansoe (62) ·4months ago (edited)
လူဆိုတာ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ ကျွန်တော့်အကြောင်းလည်း ပါမှာ ကိုမဟော့်အကြောင်းလည်းပါမှာ
ဘာမှဟုတ်ပါဘူး မေတ္တာ ကွမ်းသီးရယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်က ဦးမေတ္တာကြီး ဆိုခဲ့တာ သတိရလိုက်လို့ပါ။
လောကကြီးမှာကလည်း သူ့သဘော သူဆောင်နေကြရတာပဲ မဟုတ်လား ကိုမဟော်ရေ ☺ သူ့သဘော ကိုယ်ဆောင်လို့မှမရ ☺
မှန်ပါတယ်ဦးစိုးရေ။ လူ့ သဘော လူ့ မနောပေါ့ဗျာ။
MSC ဆိုတာ post ရေးတင်ရင် SBD ရဖို့ Pro ပေးတဲ့ group တစ်ခုမဟုတ်လားဗျ
လေးစားလျက်ပါ ဦးထွေး။ပုံမှန်ရေးတင်ပေးလို့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဗျာ။
Hello @mahaw! This isafriendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!